मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन दशैँ अगावै वा पछाडि ? यस्तो छ तयारी ! « Ok Janata Newsportal
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन दशैँ अगावै वा पछाडि ? यस्तो छ तयारी !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच दशैँ अगावै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने भद्र सहमति भएपनि कोरोना संक्रमणको जोखिम र यसबीचमा मन्त्रीले गर्ने केही काम बाँकी रहेकाले मन्त्रीमण्डल बिस्तारमा ढिलाइ हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।
दशैँ आउन करिब १८ दिन मात्रै बाँकी रहँदा यो बीचमा दशैँ लक्षित र जनसरोकारका विषयमा काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीलाई सुझाएका छन् । मन्त्रीमण्डल नै अस्थिर बनेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रीलाई अर्को व्यवस्था नहुञ्जेल ढुक्क भएर काम गर्न भनेका छन् ।
जनसरोकारका विषयमा काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओली तत्कालै मन्त्री हेरफेरमा नआत्तिएको स्रोत बताउँछ । केही समयअघि मन्त्रीबाटै जनहीतका पक्षमा प्रशंसायोग्य कार्य नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री रुष्ट बनेका थिए ।
तीन मन्त्रालयका मन्त्रीको भने टुंगो लागिसकेको बुझिएको छ ।